Ahoana ny fandikana CD amin'ny PC | Fikolokoloana biolo
1 Fomba fanao handikana CD data amin'ny PC-nao
1.1 Mampiasa ny fampiharana ImgBurn amin'ny Windows
1.1.1 Ampidino ny fampiharana ImgBurn amin'ny PC-nao
1.1.2 Adikao amin'ny CD ny CD miaraka amin'ny ImgBurn
1.1.3 Torohevitra momba ny fampiasana ny rindranasa ImgBurn
1.2 Mampiasa ny fampiharana Disk Utility ao amin'ny Mac OS
2 Fomba fanao handika CD audio amin'ny PC-nao
2.1 Mampiasa Windows Media Player amin'ny Windows
2.2 Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko iTunes ho an'ny Mac sy Windows
Mandika CD amin'ny PC zavatra natao matetika be io, satria tsy dia nisy fomba firy nitahirizana vaovao. Na izany aza, rehefa nivoatra ny zava-drehetra dia hadinon'ny olona sasany izany.
Na eo aza io fetra io, amin'ny tranga maro, io no fomba tsara indrindra fitehirizana vaovao, satria azo antoka izy io. Na izany aza, ireto fitaovana manana daty fahataperana izy ireo. Vokatr'izany, ny mahazatra indrindra dia ny manomboka tsy mahomby aorian'ny faha-20 taonany.
Noho izany, etsy ambany, hanazava ny fomba hafa isafidianana Ahoana ny fandikana CD amin'ny PC-nao, mba hahafahanao manohana sy mankafy ny mombamomba anao amin'ny fotoana sy ny toerana ilainao azy.
Fomba fanao handikana CD data amin'ny PC-nao
Raha tianao izany mandika CD izay misy antontan-taratasy, horonan-tsary, sary, lalao na angona hafa amin'ny PC-nao, tsy maintsy mamorona rakitra sary an'ity farany ianao. Aza hadino fa ny rakitra sary dia toy ny rakitra (tsy voafehy) izay itehirizan'ny rakitra rehetra ao amin'ny CD loharano. Tena azo ampiharina ireo, mora azo ary mety misy karazana rakitra.
Manaraka izany, holazainay ny fomba azonao atao mandika CD amin'ny PC-nao samy amin'ny Windows sy Mac OS. Avy eo.
Mampiasa ny fampiharana ImgBurn amin'ny Windows
Raha mampiasa Windows PC ianao ary te-hamorona rakitra sary CD, ny safidy iray dia ny fampiasana ImgBurn. Ity dia fampiharana maimaim-poana izay mamela anao amin'ny PC-nao handika sy handoro CD, DVD sy Blu-Ray na inona na inona karazany. Avy eo:
Ampidino ny fampiharana ImgBurn amin'ny PC-nao
ImgBurn dia tsotra be ny mampiasa sy manohana ny ankamaroan'ny mpilalao CD, DVD ary Blu-Ray eny an-tsena. Noho izany, raha te hampidina azy amin'ny solosainao ianao dia tsy maintsy:
Voalohany indrindra tokony hifandray amin'ny tranokala ofisialy azo an-tserasera.
Avy eo, tsy maintsy tsindrio aloha ilay zavatra "Fitaratra x - nomen'ny MajorGeeks".
Aorian'izay, manomboka amin'ny fizarana famonoana olona, ​​mandrosoa hisafidy ny kisary "Download".
Vantany vao vita ny fisintomana dia sokafy ny fisiefatra SetupImgBurn_x.x.exe izay vao avy sintominao tao amin'ny PC-nao.
Ankehitriny, eo am-baravarankely izay misokatra, tsindrio aloha ny "Eny" ary avy eo amin'ny "manaraka”. Ankehitriny, ekeo ny fepetra fampiasana ny programa, apetraho marika eo akaikin'ny entana "Manaiky ireo fepetra momba ny Fifanarahana aho".
Ary farany, hamita ny fanaingoana dia tsindrio aloha ilay zavatra "Manaraka" 5 fotoana misesy ary avy eo "farany".
Adikao amin'ny CD ny CD miaraka amin'ny ImgBurn
Raha vantany vao apetraka amin'ny PC-nao ny rindranasa dia azonao atao adikao ny CD-nao amin'ny solosainao mampiasa ImgBurn. Mba hanaovana izany dia araho ireo dingana, izay holazainay etsy ambany, ireto dia ireto:
Voalohany, atombohy ny programa amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary misy azy eo amin'ny birao.
Tsindrio avy eo ny bokotra "Mamorona sary amin'ny kapila”. Hamarino tsara fa ao amin'ny menio mitete “loharano”Voafidy ny kapila CD tianao alain-tahaka.
Aorian'izay, kitiho ny sary famantarana ny "Folder mavo”Any amin'ny ankavia havia. Ity dia ahafahanao misafidy ny fampirimana izay hamonjy anao ny fisie Sarin'ny CD.
Vantany vao vita io dingana io, apetraho ny hafainganam-pandeha tadiavinao ho an'ny kapilao.
Mandrosoa izao dia tsindrio ilay kisary voatondro ho "CD”(Miaraka amin'ny zana-tsipika manga sy takelaka banga eo akaikiny) hanombohana maka tahaka ny angona avy aminy.
Ary farany, aorian'ny fomba teo aloha dia hahazo rakitra sary ao amin'ny “ISO”. Ity endrika ity dia azo ampiasaina hanoratana amin'ny kapila hafa (mampiasa ImgBurn na rindrambaiko mety hafa amin'izany) na azonao ampiasaina amin'ny PC-nao hijerena ny atiny.
Torohevitra momba ny fampiasana ny rindranasa ImgBurn
Mariho fa raha asaina misintona ianao “Rindrambaiko fampiroboroboanaFanampiny ”mandritra ny fikirakirana, toy ny REACHit na AVG Zen, dia aza ekena izany, esory ny marika (na tsy apetrakao) amin'ireo entana mahaliana azy ireo, amin'izay dia hanana fahafaha-mitahiry bebe kokoa amin'ny kapila ianao.
Ny interface ImgBurn ho an'ny mpampiasa dia amin'ny teny anglisy. Nefa, raha tianao, dia azonao atao ny mandika azy amin'ny teny Espaniola amin'ny alàlan'ny fampidinana rakitra manokana amin'ny Internet. Ny rakitra resahina dia English.lng izay azonao sintonina mivantana avy amin'ny tranonkala ary tsy maintsy esorina ao anaty folder izany C: Rakitra fandaharana (x86) Teny ImgBurnavy amin'ny solosainao.
Mampiasa ny fampiharana Disk Utility ao amin'ny Mac OS
Raha mampiasa solosaina Mac ianao dia azonao atao ny mandika ireo CD-nao amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny "Disk Utility". Ity no fampiharana Mac OS default ho an'ny fitantanana ireo kapilao sy fizarazaran'ity karazana fitaovana ity. Avy eo dia tsy maintsy ataonao izao manaraka izao:
Ny dingana voalohany tokony harahinao dia ny manokatra ny "Disk Utility". Mba hanaovana izany dia tsy maintsy tsindrio ny kisary misy azy ao anaty fampirimana mihoatra ny Launchpad.
Aorian'izay dia tsy maintsy misafidy ny anaran'ny CD amin'ny sisin-tsoratry ny programa ianao.
Mandehana any amin'ny menio "File> Sary vaovao> Sarin'ny (lohateny CD)”Any amin'ny ankaviany ambony.
Amin'izay fotoana izay dia hisokatra ho azy ny varavarankely iray. Manohiza mandrindra ny safidy voalaza ho "Master DVD / CD" avy amin'ny menio mitete "endrika".
Safidio izao ilay folder raha tehirizinao ny fisie sary ary kitiho ny "afa-tsy”Hanombohana maka tahaka ny angona voarohirohy.
Ary farany, hahazo fisie amin'ny endrika "CDR", Izay azonao ampiasaina amin'ny rakitra ISO mahazatra.
Raha azo atao, raha te hanova ny fisie CDR ho fisie endrika ISO ianao dia sokafy ny "Terminal" sy ny baiko "sudo hdiutil makehybrid -iso -joliet -o (lalana ISO) (lalana CDR)”. Aza adino fa raha tokony (làlana ISO) sy (làlan'ny CDR) dia tsy maintsy ampidirinao ny làlana feno an'ny rakitra sary tianao ho azo sy ny loharano
Fa raha tsy manome anao valiny irina ny Disk Utility dia afaka mamorona rakitra sary amin'ny CD-nao amin'ny alàlan'ny hafa ianao free application mifanaraka amin'ny Mac OS anao izany.
Fomba fanao handika CD audio amin'ny PC-nao
Hiresaka safidy hafa amin'ny fomba fandikana CD audio amin'ny PC-nao izahay ankehitriny, na amin'ny rafitra izany Windows toy ny Mac OS. Ireo dia:
Mampiasa Windows Media Player amin'ny Windows
Raha mampiasa ny rafitra miasa Windows ianao ary te-handika ireo hira avy CD mozika ao amin'ny PC-nao afaka mampiasa Windows Media Player ianao. Ity haino aman-jery haino aman-jery mahomby ity dia tafiditra ao amin'ny ankamaroan'ny kinova amin'ny rafitra fiasan'ny Microsoft, izay manampy be tokoa. Manaraka izany, holazainay ny fomba manaraka, dia izao:
Mba "rip" CD audio misy Windows Media Player, ny hany mila ataonao voalohany dia ny manokatra an'io programa io.
Miroso amin'ny fisafidianana ilay entana voatondro ho "Lohateny Disc”Avy amin'ny sisiny ankavia.
Avy eo dia mila mandeha amin'ny menio ianao ary misafidy mifanesy "Adikao ny fikirana avy amin'ny CD> Format”. Ireo dia ho hita eo amin'ny ankavanana ambony.
Amin'ity fotoana ity dia tsy maintsy misafidy ny output format izay tianao. Anisan'ireo zavatra azonao atao ny manana safidy isan-karazany. Ireto no ankapobeny:
Ho fanampin'izay, hanana ny safidy hisafidianana ny kalitao feo (Manoro hevitra izahay 320 Kbps, izay kalitao avo indrindra).
Rehefa avy nanamboatra ny toe-javatra Windows Media Player ianao dia apetraho eo akaikin'ny Track Titles ny kopia amin'ny pc.
Ary farany, tsindrio ny bokotra voatondro ho "Copy avy CD”(Havia ambony) hanombohana famindrana angona. Azafady, mariho fa ny rakitra output dia ho voatahiry ao amin'ny Music folder amin'ny PC-nao.
Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko iTunes ho an'ny Mac sy Windows
Raha mampiasa solosaina Mac OS ianao, dia azonao atao ny mandroba ireo hira avy amin'ny CD audio miaraka amin'i iTunes. Ity rafitra mahomby sy azo ampiharina ity dia azo jerena amin'ny kinova ho an'ny Mac OS ary koa ho an'ny Windows. Amin'ny tranga roa an'ny maimaimpoana (Ao amin'ny rafitra Mac OS dia ampidirina amin'ny fomba natoraly). Avy eo:
Ny fizotry ny fanafarana CD mozika ao anaty iTunes tena intuitive io. Noho izany, aorian'ny fanokafana ny programa ary ampidiro ao anaty solosaina ny kapila (CD) dia valio azafady "Eny" amin'ny fampitandremana hita eo amin'ny efijery toy ny "¿¿Te-manafatra (lohateny CD) ao amin'ny tranomboky iTunes ianao? " ary dia ho nifarana izany.
Raha atao default dia voatahiry ho rakitra AAC ny hira. Raha te hanova ny endrika famoahana sy / na ny kalitaon'ny hira azonao ianao dia mankanesa any amin'ny “iTunes> Preferensi".
Safidio izao ny karatra "General" eo am-baravarankely izay misokatra ho azy.
Aorian'izay dia azonao atao ny manindry ny bokotra voatondro ho "Fanovana fanafarana”, Izay hita ao amin'ny faritra ambany ankavanana.
Ary eo am-baravarankely izay misokatra, safidio ny endrika fivoahana tianao ao amin'ny menio mitete. Raha ohatra, dia mety ilay endrika MP3.
Miroso amin'ny fisafidianana ny kisary voatondro ho "Mampiasa fanafarana”. Safidio ihany koa ny kalitao irina ao amin'ny menio milatsaka.
Ho famaranana, antenainay fa ireo fampahalalana rehetra ireo dia mifandraika amin'ny fomba hafa isafidianana Ahoana ny fandikana CD amin'ny PC-nao, manampia fanampiana lehibe ho anao. Raha tianao koa ity lahatsoratra ity, dia ampirisihinay hiditra manaraka ity rohy izay hahitanao ireo fampahalalana isan-karazany mety hahaliana anao.
Previous: Previous post: Fampiharana handikana ny fifandraisana amin'ny iPhone mankany SIM
Next: Next post: Fantaro raha nisy laharana voasakana niantso anao